Corruption(Corruption) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
एनसेल बहिस्कार अभियान भूसको आगो झै फैलियो, कतै स्वस्फूर्त विरोध, कतै राजनीतिक रंग !
काठमाण्डौ । खरीद बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर नतिरेको विदेशी लगानीमा संचालित निजी स्तरमा देशकै ठूलो दूरसंचार प्रदायक कम्पनी एनसेल बहिस्कारको अभियान भूसको आगो झै देशभर फैलन थालेको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रबाट युवाहरुले स्वस्फूर्त रुपमा नेपाललाई एनसेल खरीद बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर नतिरी टेलियासोनेरा कम्पनीका मालिक भागेका आक्रोशमा एनसेल...
पाइलट पनि नक्कली !
काठमाडौ । नक्कली चिकित्सक र नक्कली इञ्जिनियरहरु पक्राउ गरी ठेगान लगाउने सफलता हात पारेपछि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धन नक्कली पाइलट खोजी गर्नेतर्फ मोडिएको छ । यही क्रममा प्रहरीले बुधबार ललितपुरको कुपण्डोलबाट एक नक्कली पाइलटलाई आफ्नो फन्दामा पारेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले विशेष सूचनाका आधारमा गोमा एयरमा ...
दीक्षितपछि अर्को ठूलो माछा जालमा पार्ने अख्तियारको तयारी, जोगाइदिन महराको साउथब्लकमा गुहार
काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेसँगै अहिले नेपालमा तरंग पैदा भएको छ । अख्तियारको सो कदमको बिषयमा अनेकन टिकाटिप्पणी भइरहेको बेला अख्तियारले चाहि अन्य ठूला माछा समेत पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको सूचना चुहिएको छ । अख्तियारले भनेको ठूलो माछाको अबको...
साझाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित पक्राउ(अख्तियारले दिएको पक्राउपूर्जीसहित)
काठमाण्डौ । भ्रष्टाचारको आरोपमा पटक पटक अख्तियारको छड्केमा पर्ने गरेका र नागरिक समाजको आवरणमा गलत काम गर्ने गरेको आरोप समेत खेप्दै आएका साझा यातायातका अध्यक्ष तथा हिमाल खबरपत्रिकाका प्रकाशक पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार पक्राउ गरेको छ । ‘दीक्षितविरुद्ध गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको...
आयल निगमको डिपो नै ठगी र कालोबजारीमा
काठमाण्डौ । उपभोक्तालाई सहज रूपमा पेट्रोलियम उपलब्ध गराउने दायित्व रहेको नेपाल आयल निगमको डिपो नै ठगीमा संलग्न भेटिएको छ। निगमको अमलेखगन्जस्थित डिपोले प्रतिट्यांकर २ सय लिटरसम्म तेल ठगी गरेको पाइएको हो। गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयको टोलीले बिहीबार डिपोको 'प्रुभिङ ट्यांक' जाँच गर्दा तेल परिमाण कम भेटिएपछि ठगी पुष्टि भएको...
'पनामा पेपर्स लिक्स'बारे अख्तियारले अध्ययन थाल्ने
काठमाण्डौ । संसारका भ्रष्ट शासक, पूर्व शासक, नेता, व्यापारीहरुले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी ट्याक्स हेभन(कर तिर्नु नपर्ने ठाउँ)मा जम्मा गरेको सनसनीपूर्ण खुलासा गरेको र विश्वमा हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचारको खुलासाको रुपमा टिप्पणी गरिएको पानमा(प्यानमा) पेपर्स लिक्स बारेमा नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अध्ययन र छानबिन...
विद्युत प्राधिकरणलाई नै एक अर्ब ३८ करोड जरिवाना !
रमेश लम्साल/रासस काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वस्तुनिष्ठ निर्णय नगर्दा सोलु करिडोर प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा पूरा नहुने भएको छ । प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन नसक्दा आगामी २०७५ सालपछि प्राधिकरणले एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत भदौ ४ को बैठकले २७ करोड रुपैयाँ बढी बोलकबोल गर्ने...
गरीबी निवारण कोषका ३६ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा
काठमाण्डौ । गरीबी निवारणको नाममा आफ्नै गोजी भरेका गरीबी निवारण कोषका ३६ कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । आयोगले कोषका ती अधिकारीले मिलेमतोमा ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै मुद्धा दायर गरेको हो । ताहाचल, काठमाण्डौमा रहेको गरिवी निवारण...
उत्पादकलाई आममाफी, बिक्रेतालाई जेल !
काठमाण्डौ । हाम्रो देश नै विचित्रको छ । यहाँको कानून र त्यसको कार्यान्वयनको शैली त झनै विचित्रको छ । तपाईसँग पहुँच छ, शक्ति छ, पैसा छ, ठाउँमा आफन्त छन् भने तपाईले ठूलै अपराध गरे पनि सजिलै छुट्कारा पाउनुहुन्छ । जस्तो औषधिजस्तो संवेदनशील उत्पादनमा चरम कालोबजारी गरे पनि पक्राउ परेलगत्तै पैसा र पावरकै कारण केही साताअघि लोमस फर्मास्यूटिकल्सका...
सिंचाईमन्त्रीको नयाँ घूस प्रकरणको सनसनीपूर्ण रहस्योद्घाटन, क्वार्टरमै लाइन लागेर कर्मचारीले बुझाए थैली
काठमाण्डौ । पैसा देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र बल्छन् रे । नेपालजस्तो भ्रष्टाचारले व्याप्त मुलुकमा पदमा पुग्नेले पैसा ताक्दैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो एउटा गफ मात्र हुनेछ, सर्वसाधारणले बुझेको कुरा हो यो । अझ गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्री भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डूबेका छन् ।...
इटहरीका सफाई कर्मचारीमाथि यो कस्तो ज्यादती ? कोहीसँग मुख खोले जागिर खाइदिने धम्की
इटहरी । होचो भएकै कारण सधैंभरि त्यसैको मुखमा घोचो हालिरहनु न्यायसंगत होइन । कानूनलाई आफू अनुकुल अपव्याख्या गरी जे पायो त्यही गर्नु त झनै अन्यायपूर्ण हुन्छ । कानून सबैलाई लाग्नुपर्छ, कानूनले पीडितलाई न्यायको भाषा बोल्छ, पीडकलाई कारबाही । यति मात्र होइन, कानूनलाई सन्कीको भरमा जसले प्रयोग गर्छ, त्यसको परिणाम उसैले भोग्नुपर्छ । सन्कीको भरमा...
कालोबजारी गर्ने औषधि उद्योगी छाड्दा ५ करोडको खेल, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रचण्डसम्मले दवाब दिएको खुलासा
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल लगायतका जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरुले कालोबजारीका नायकहरुलाई खुल्ला रुपमा संरक्षण गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत स्वयम्ले नेपालको विद्यमान कानून, नियम र म...
औषधिमा मात्र होइन, सिमेन्टमा पनि कालोबजारी गर्छ पाण्डे समूह
काठमाण्डौ । औषधिमा चरम कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परी विभिन्न संघ–संगठनको दवाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा रिहा भएकामध्ये पाण्डे समूहकै लगानी रहेको सिमेन्ट उद्योगले पनि कालोबजारी गरी जनता ठगिरहेको पाइएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष रही कार्यकाल नसकिँदै पुरानो भ्रष्टाचार मुद्धा ब्यूँतिएर...
लोकमानको निर्देशनमा १० भाई इन्स्पेक्टरको कत्लेआम !
काठमाण्डौ । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील सरकारी एजेन्सी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको तीव्र गतिविधिका कारण देशका साना भ्रष्टहरु हायलकायल छन् । भलै, अख्तियारले ठूला माछालाई समाउने त्यति धेरै आँट र प्रयास चाहि गरेको छैन । केही राम्रा काम गरेर वाहीवाही कमाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका कतिपय गलत निर्देशन र...
शक्तिकेन्द्रको दवाबपछि छाडियो औषधि उद्योगीलाई, कालोबजारीविरुद्ध लागेका एसएसपी निराश
काठमाण्डौ । नेपालकै दुई चर्चित औषधि उद्योगका संचालक र व्यवस्थापनको उच्च तहमा कार्यरत कर्मचारीको गिरफ्तारीको विरोधमा आइतबारदेखि सम्पूर्ण औषधि उत्पादन बन्दको घोषणा गरिएको केही घण्टा नबित्दै पक्राउ परेकाहरुलाई प्रहरीले रिहा गरेको छ । शुक्रबार पक्राउ परेका औषधि उद्योगका चार सञ्चालक तथा कर्मचारी रिहा भएका हुन् । नेपाल औषधि...